kartaa bakka UEFAn bulchu
Union of European Football Associations, kan yerro bayye maqqa yoo gababa UEFA jedhamun bekkamu (pronounced Template:IPA (you-AY-fuh) or Template:IPA (oo-Ay-fuh) or Template:IPA) kuni bulchaa fi kutta ilalla kubba milla (football (soccer)) Europeiit. Kampaniin kuni kutta taphaa kubba milla Yuurooppi hunda ilallu yoo ta'u, kan qofaa osoo hin ta'in taphaa Europe biyya biraa wajjin ademsistu, tapha clubi, besse mo'achuf kenamu qabata, ademsa tapha fi mirgaa "media"n tapha kessatti qabdu bulchaa. Bulchotni tapha kubba milla Eshiyaa kessatti argaman bayyen isaani Asian Football Confederation osoo hin ta'in UEFA jalatti argamu. Biyyotni kuni immo Isiraa'el, Saayippires, Armeeniyaa, Ji'oorjiyaa, Tarkii, Kaazaakistaan, Raashiyaa fi Azarbaajan, haa ta'u malle Isiraa'el fi Kaazaakistaan miseensotta AFC turaan. Saayippires kutta kubaa milla Europe jalatti qodamu fillate malee, carra Yuurooppi, Eshiyaa fi Afrikaa taphachu qabu ture.
UEFAn qoqqodama FIFA ja'een kan ardii ja'atti argaman kessa guddicha dha. Confederation hunda calla jabbena qabenya fi adunya kessatti taphaa dhibaa gochuun tokkoffa dha. Taphattotti adunya guggudon bayyen "European league" kessa taphatu, kanaaf sababi tokko wa'ee leagotni guggudon Europe kessatti argaman England, Firaansi, Xaaliyaanii, Ispeen fi Germany waan qarshii bayye taphattotaf keenanif. Biyyotni guggudonis UEFA kessatti argamu. Bakka bana ta'e 32 kan 2006 FIFA World Cup kessa, 14 buduni kubba milla UEFA jalatti argamanif kan kenname yoo ta'u, FIFA World Ranking irratti biyyotta gubba 20 kessa 16 miseensotta UEFAt.
UEFA kan itti hundeffame June 15, 1954 yoo ta'u, kan itti hundeffames anna Basel jedhamtu kan Switzerland kessatti argamtu kessatti. UEFAn kan dhabatte ergaa mariin French, Italian fi Belgian FA jidutti godhame booda. "Headquarters"iin isaa Paris kessa hanga bara 1959 kan ture yoo ta'u, achiin bodda UEFAn gara Bernit godanne. Henri Delaunayn General Secretary tokkoffa yoo ta'u Ebbe Schwartz immo peresdantii tokkoffa ture. Kuttan bulcha UEFA hanga bara 1995it Nyon, Switzerland kessa ture. Miseensotti UEFA biyyotta 25 turaan, amma garuu 53 dha. Isaanis gadii bu'i ilalli. UEFA presidantin amma Michael Platini dha.
UEFAn akka bulchaa biyyotta walitti qabamanit, European Commission wajjin wal-dhabii qaba turee. Waggotta 1990 jiraan kessatti UEFAn waan mirgaa television fi akkasumas Bosman ruling (wali-daldallu) irra kan ka'e serra Europe wajjin dhaquf jijjirama gudda gochu qabdi ture.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=UEFA&oldid=29437" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 22 Caamsaa 2017, sa'aa 02:24 irratti.